အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် အသင့်ဖြစ်ခဲ့သူများ | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Opinion » Feature » အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် အသင့်ဖြစ်ခဲ့သူများ
Wed, 2018-05-09 04:30
No.1794 Wednesday, May 9, 2018
မီးလောင်မှုတွင် ကူညီခဲ့သည့် ကိုပြည်ဇာနည်နွေနှင့် သူငယ်ချင်းများ
မေလ ၅ ရက် နံနက်က ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်ရှိ အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင် မီးလောင်နေပြီး ဘေးချင်းကပ်ဟိုတယ်ထဲသို့ မီးခိုးများ အဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်နေသည်။ ခရီးသွားကုမ္ပဏီရုံးခန်းတစ်ခု မီးလောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံ အရှေ့ဘက်အခြမ်းတွင် လောင်နေ၍ အနောက်ဘက်မှ ပြေးရန်ကြံသော်လည်း အရေးပေါ်လှေကားက မရှိပေ။
ပြေးစရာမရှိတော့သည့်အ ဆုံး ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ရှိ လေအေးပေးစက်ပေါ်တွင် အမျိုး သမီးတစ်ဦး ကြောက်လန့်တကြား ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည်။ ဟိုတယ် ဘက်အခြမ်းတွင်လည်း အမေရိ ကန်သူတစ်ဦး တိုက်နံရံရှိ ပိုက်လုံးများကို ဖက်တွယ်ရင်း ကြောက် လန့်တကြားဖြစ်နေသလို အောက်ဘက်ခန်းရှိ တရုတ်လူမျိုး ဇနီး မောင်နှံလည်း ကြောက်လန့် တကြားဖြင့် ခုန်ဆင်းသင့်၊ မဆင်း သင့် ချီတုံချတုံ။
အဆိုပါ ထိတ်လန့်ဖွယ်မြင် ကွင်းကို မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ခန်း၏ အနောက်ဘက်တည့် တည့် တိုက်ခန်းနေသူ ဦးမောင် မောင်လှတစ်ယောက် မြင်တွေ့ နေရသည်။
‘‘ခဏနေ ရောက်လာမယ်။ ခုန်မချနဲ့နော်’’ဟု မီးလောင်သည့် အခန်းမှ မိန်းကလေးကို သတိပေး ပြီး တစ်ဆက်တည်းမှာပင် "Hello!Hello! Wait! Wait!" ဟု ဟိုတယ် ဘက်မှ နိုင်ငံခြားသားများကို သတိပေးရပြန်သည်။ မြန်မာလို ရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုရော သတိပေး နေရသည့် ဦးမောင်မောင်လှသည် တံထွေးပင်သီးသည်။
၎င်းအော်ဟစ်အသိပေးနေ ချိန်တွင်ပင် အသက် (၃၀)ခန့် လူငယ်တစ်စုက ခုန်ချရန် ပြင်ဆင်နေသူများကို အသက်ဘေးမှ ကယ်တင်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်။
လေအေးပေးစက်ပေါ် ရောက်နေသည့် အမျိုးသမီးငယ် ကို ကယ်တင်ရန် အသက် (၃၀) ခန့် အမျိုးသားတစ်ယောက် ပိုက် လိုင်းမှတစ်ဆင့် သုံးလွှာသို့ တက် သွားပြီး အမျိုးသမီးကို ဖေးကူကာ ရေသွယ်ပိုက်နှင့် ပြတင်းပေါက် အထစ်များကို ခဲရာခဲဆစ်သုံးပြီး မြေပြင်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင် ခဲ့သည်။
ထိုအမျိုးသားက ကိုပြည်ဇာ နည်နွေဖြစ်ပါသည်။ ကိုပြည်ဇာ နည်နွေ (ခေါ်) ကိုပြည်နှင့် သူငယ် ချင်းလေးယောက်တို့က အဆိုပါ အမျိုးသမီးအပြင် မီးလောင်နေ သည့်တိုက်နှင့် ကပ်လျက်တည်းခို ခန်း၏ အနောက်ဘက်ပြတင်း ပေါက်များမှ ခုန်ချရန်ပြင်ဆင်နေ သူ နိုင်ငံခြားသားသုံးဦးကိုလည်း ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့် ဆင်းသက် နိုင်ရန် ပါဝင်ကယ်တင်ခဲ့သည်။
ကိုပြည်ဇာနည်နွေတစ် ယောက် အမျိုးသမီးကို ကယ်တင် နေချိန်မှာပင် သူ့သူငယ်ချင်း ကိုသားငယ်ကလည်း တစ်ဖက် ခန်း ခြောက်လွှာရှိ နိုင်ငံခြားသူကို ကယ်တင်နိုင်ရန် အမျိုးသမီးရှိရာ သို့ ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တွယ် တက်ကာ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ရောက်ရှိသည်နှင့် အောက်တွင် ငြမ်းဆင်ကာ တက်ရောက်လာပြီး အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသူများက ပစ်ပေးသည့်ကြိုးကို အသုံးပြုကာ နိုင်ငံခြားသူအား ကိုထွန်းထွန်းနှင့် အတူ ပူးပေါင်းကာ အောက်သို့ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ရောက်ရှိနိုင် သည်အထိ ကူညီခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ သက်စွန့်ဆံဖျား ကြိုးပမ်းကယ်တင်မှုကြောင့်ပင် ယင်းမီးလောင်မှုတွင် လူ့အသက် ဆုံးရှုံးမှုမရှိခဲ့ခြင်းဟု ပြောဆိုက မှားနိုင်မည်မထင်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်အတွင်း နံနက်ပိုင်း လုပ်ငန်း စတင်အချိန် ၉ နာရီကျော်တွင် နိုင်ငံခြားသူတစ်ဦး၏ အော်ဟစ်သံကို ကိုပြည်ဇာနည်နွေစတင် ကြားသိရခြင်းဖြစ်သည်။ ကြားလိုက်ရသည့် အသံသည် မသဲကွဲသလို နားလည်းမလည်သော်လည်း အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု သူထင်ခဲ့သည်။
ထင်သည့်အတိုင်းပင် နိုင်ငံ ခြားသူတစ်ဦးက သူ့ဘာသာ စကားဖြင့် တိုက်တစ်ခု၏ အ နောက်ဘက် ပြတင်းပေါက်မှ အော်ဟစ်လိုက်၊ အတွင်းသို့ဝင် သွားလိုက်နှင့် တွေ့ခဲ့ရသည်။ ထို့ အပြင် ယင်းအခန်းမှပင် မီးအခိုး အနည်းငယ် ထွက်ရှိနေသည်ကို ပါ အတူမြင်လိုက်ရသည်။
ယင်းတိုက်နှင့် တစ်ဆက် တည်းရှိ အောက်ဘက်အလွှာတွင် လည်း အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုး သမီးတစ်ဦးတို့က ပြတင်းပေါက် ဖွင့်ကာ အကူအညီတောင်းနေရာ မီးခိုးများ ထွက်နေသည်ကို ထပ်မံ တွေ့ရှိသဖြင့် မီးလောင်နေသည့် အဆောက်အအုံအတွင်းမှ လူများက အကူအညီတောင်းနေခြင်းဖြစ် ကြောင်း ကိုပြည်တစ်ယောက် နားလည်လိုက်သည်။
အကူအညီတောင်းခံသူများ က အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အသက်လွတ်ရာလွတ်လမ်းဖြစ် သည့် ခုန်ချမည့်လမ်းစဉ်ကို အသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းလာနေသည်။
‘‘အဲဒီအချိန်မှာ အပေါ်ကလူ တွေ ခုန်ချလိုက်မှာကိုပဲ စိုးရိမ်နေ တယ်။ သူတို့ အရမ်းကြောက်နေ ကြတာ။ သူတို့ကို ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ လာကယ်မယ်ဆိုပြီး အော်ပြောပြီး ပိုက်ကတွယ်တက် တာ၊ ကိုယ့်အတွက် အဲဒီအချိန်မှာ မတွေးမိဘူး’’ဟု ကိုပြည်က ဆို သည်။
ယင်းအချိန်မတိုင်မီပင် ကိုပြည်နှင့်အတူ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်သည့် ကိုကျော်မင်းနိုင်၊ ကိုထွန်းထွန်း၊ ကိုသားငယ်နှင့် ကိုမောင်မောင်တို့က အကူအညီ တောင်းခံနေသူများထံ ရရာနည်း လမ်းဖြင့် ရောက်ရှိကာ သွား ရောက်ကူညီခဲ့သည်။
ကိုပြည်ဇာနည်နွေအနေဖြင့် မီးလောင်ရာနေရာသို့ ရောက် အောင်သွားစဉ်က နိုင်ငံခြားသူ တစ်ဦးကို ဦးစွာကယ်တင်ရန် ဆန္ဒဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့အခြေအနေတွင် မီးခိုး လုံးများ များပြားစွာထွက်နေသည့် မီးလောင်ရာအခန်းမှ အမျိုးသမီး ငယ်သည် အဲကွန်းပုံးပေါ်တက် ကာ ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေမှု ကြောင့် ဦးစွာကယ်တင်ဖြစ်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုသည်။
‘‘အမှီအတွယ်က အဆင် မပြေဘူး။ လက်ဖျားလေးတွေနဲ့ ကိုင်ရတယ်။ ကောင်မလေးက လည်း တုန်နေတယ်။ ကျွန်တော် လည်း သူ့ကြည့်ပြီး ကိုယ်ပါတုန် နေတာ။ နှစ်ယောက်စလုံး ပြုတ် မကျအောင် ကိုင်ထားရတာ။ အ ရင်ကလည်း အမြင့်ကို အမှီအ တွယ်မပါဘဲ မတက်ဖူးခဲ့ဘူး’’ဟု ကယ်တင်ခဲ့စဉ်က ခက်ခဲပုံကို ကိုပြည်က ပြောသည်။
ထို့အတူ သုံးလွှာရှိ တစ်ဖက် အခန်းမှ တရုတ်လူမျိုးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုနေသည့် ငြမ်းများ ယူဆောင်တပ်ဆင်ကာ ကိုကျော် မင်းနိုင်နှင့် ကိုမောင်မောင်တို့က ငြမ်းမှတစ်ဆင့် တက်ရောက်ကယ်တင်ခဲ့သည်။
‘‘ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် စိတ် ထဲမှာ ဘာစိုးရိမ်စိတ်မှ မစဉ်းစားမိ ဘူး။ ကယ်ဖို့စိတ်ပဲရှိတယ်။ နိုင်ငံ ခြားသူလို့လည်း မသိဘူး။ အပေါ်ရောက်မှ သိတယ်။ သူက ကိုယ့် ထက်ထွားနေတော့ ကြိုးနဲ့ အောက်ချပေးဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲသေချာလုပ် ခဲ့ရတယ်’’ဟု ကိုသားငယ်က ပြောသည်။
ကိုပြည်ဇာနည်နွေတို့ သူ ငယ်ချင်းတစ်စုက လူ့အသက်များ ကို နောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ကယ် တင်နေသည့်အချိန်တွင်ပင် မီး လောင်မှု ရှေ့ဘက်ခြမ်းကို ဘေးကပ်လျက်ရှိ ကျောက်တံတားရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အခန်းအတွင်းဝင်ရောက်ကာ မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေ သည်။
မီးလောင်မှုအသေးစားတစ် ခုဖြစ်သော်လည်း လူသားချင်းစာ နာမှု စိတ်ဓာတ်ကို အရင်းခံကာ လူငယ်များ၏ စုပေါင်းအားဖြင့် လူလေးဦး၏ အသက်ကို ကယ် တင်နိုင်ခဲ့သည်။
ယင်းမီးလောင်မှုတွင် ကူညီ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် ၎င်းတို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ စွမ်း ရည်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ် ငန်းခွင်မှ လုပ်သားများ၊ ဘေးပတ် ဝန်းကျင်ရှိ နေထိုင်သူများ၏ ဖေးမကူညီမှုကြောင့် မီးဘေးမှ အ သက်ဘေးများကို လွတ်မြောက် အောင် ကယ်တင်နိုင်ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အထက်ပါ မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကူညီကယ်ဆယ်ကြ သူငါးဦးကို ကျောက်တံတားမြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးနေမျိုးထက်က မေလ ၆ ရက်တွင် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေး အပ်ခဲ့သည
ထို့အပြင် ကယ်တင်သူ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် နိုင်ဂရု(ပ်)ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက ကယ်တင်သူများကို ရွှေဆွဲကြိုးများ ချီးမြှင့်ကာ အခမ်းအနားဖြင့် မေလ ၇ ရက် ညနေတွင် ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
‘‘အခုလို ဆုတွေပေးမယ်ဆို တာလည်း တကယ်မသိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အခုလို သူများ အသက်ကယ်ခွင့်ရလို့ အရမ်းဝမ်း သာမိတယ်။ ဘဝအတွက် ဘယ် တော့မှ မေ့လို့မရတဲ့ အမှတ်တရ တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် တစ်သက် လုံး ဂုဏ်ယူနေမှာပါ’’ဟု ကိုပြည် က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ၏ ပြောကြားချက်အရ မီးလောင် သည့် တိုက်ခန်းသည် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံဖြစ်၍ အနောက် ဘက်အဆင်း လှေကားမပါရှိပေ။ ရေသွယ်ပိုက်တန်းများနှင့် အိတ်ဇောပိုက်သာ တိုက်တစ်လျှောက် သွယ်တန်းထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အထပ်မြင့် တိုက်များတွင် နောက်ဖေးအရေး ပေါ်လှေကားများ မရှိမဖြစ်ပါရှိရ မည်ဖြစ်သော်လည်း အချို့တိုက် များသည် ယခင်ဆောက်လုပ်ထား သော တိုက်များဖြစ်ခြင်းကြောင့် နောက်ဖေးလှေကားများ မရှိပေ။ သို့သော် အများနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများအနေဖြင့် နောက်ဖေးလှေကားမရှိပါက သတ္တုလှေကား၊ ကြိုးလှေကား များကို အရေးပေါ်အခြေအနေ တွင် အသုံးပြုရန်ထားရှိဖို့ လိုအပ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူး ဦးဝင်းဝင်းက ဆိုသည်။
မီးလောင်မှုတွင် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီခဲ့သော ကိုပြည်ဇာနည်နွေ အပါအဝင် သူငယ်ချင်းငါးဦးကို မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် များက ကြိုဆိုကျေးဇူးတင် ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများရှိလာ သော်လည်း ကူညီကယ်ဆယ်ခဲ့ ချိန်တွင် မည်သည့်မျှော်လင့်ချက် မျှမရှိကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။
‘‘ကျွန်တော်တို့က ရိုးရိုးသား သားပဲ လူ့အသက်ကို ကယ်ခဲ့ တာ။ ဘာအတွက်ကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး’’ဟု ကိုကျော်မင်း နိုင်က ပြောပါသည်။
တောဆင်ရိုင်း ထိန်းသိမ်းရေး အဖြေသစ် အလုပ်ဖြစ်မလား
သန်းခေါင်ယံ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရှေ့ဆက်ရမည့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေ